Onye obula bu onye ndu ndi oru nke ndi mmadu na ndi mmadu na-ere ahia na ndi mmadu na-enye ndi ahia ya ihe dika 1,750 njikọ site na onye oru, 200% abawanye na pipelines ire ere, 48% nnukwu nkwekọrịta nha, mmụba 4x na mmata ihe ngosi, na otu ụzọ n'ụzọ iri ụgwọ nke akwụ ụgwọ ihe omume mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Gini mere eji akwado ndị ọrụ? Companylọ ọrụ ọ bụla nwere ihe dị ike, na-enwetaghị akụ nwere ikike ịbawanye ahịa, ịkwanye ahịa na ike HR; olu na netwọkụ nke ndị ọrụ gị. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe,
Wa na-agbanwe. Ulo ahia zuru ụwa ọnụ, ndị na-ere ahịa, ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ… nsogbu ndị a na-eto eto na-akụ ebe ọrụ ma chọọ ngwaọrụ ndị ga-eso ha. N'ime ụlọ ọrụ nke anyị, anyị na-eji Mindjet (onye ahịa anyị) maka iche echiche na nhazi usoro, Yammer maka mkparịta ụka, na Basecamp dị ka ebe nchekwa ọrụ anyị n'ịntanetị. Site na Infographic nke Clinked, Steeti nke Imekọ Ihe Ọnụ: Ahụmịhe anyị, na nke ndị asọmpi anyị, enweghị mgbagha: 97% nke azụmaahịa na-eji ngwanrọ arụ ọrụ
Tupu mkparịta ụka anyị na Fraịde na Harold Jarche, anụtụbeghị m banyere okwu ahụ bụ ịgba ọrụ. Kemgbe Septemba gara aga, ụlọ ọrụ na-ere ahịa inbound abụrụla ebe enyere anyị aka. ROWE bụ Nsonaazụ Ọrụ Naanị… nke a na-enye ndị ọrụ ọrụ ka ha rụọ ọrụ dịka ha chọrọ ma ọ bụrụhaala na achọrọ ọrụ ahụ. Dịka otu obere otu, otu nsogbu anyị nwere ROWE na-agwa ibe anyị okwu. Offọdụ n'ime
Ngwaọrụ ole na ole na-amalite ịpụta maka ụlọ ọrụ iji jikwaa nkwukọrịta site na iji Twitter ma ọ bụ maka iji obere blọgụ n'ime ụlọ ọrụ ha. M na-jikwaa pushing Martech Zone na-eri nri na Twitter tinye n'ọrụ Twitterfeed. Mgbe m gbabara n'ime oge ụfọdụ mgbe m na-egosipụta Twitterfeed na webinar na nso nso a, agbanyeghị, ụfọdụ ndị na-ekiri ha kesara na e nwere ụfọdụ nnukwu ngwaọrụ ndị ọzọ. Ekpebiri m ile anya! Ngwaọrụ Njikwa Twitter maka Companlọ Ọrụ ExactTarget SocialEngage